नेपालको फेरि अर्को हार « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
नेपालको फेरि अर्को हार
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । थाइल्यान्डमा जारी एसिसी महिला एसिया कप टि–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार चौथो हार ब्योहोरेको छ । बैंककस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको खेल मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले कमजोर प्रदर्शन गर्दै थाइल्यान्डसँग आठ विकेटको हार बेहो¥यो । यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तानसँग नौ विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग आठ विकेटको हार बेहोरेको थियो । त्यस्तै मङ्गलबार भएको तेस्रो खेलमा बङ्गलादेशसँग ९२ रनले पराजित भएको थियो ।
तीस रनमा पहिलो विकेट गुमाएको नेपालले त्यसपछि सम्हालिएर ब्याटिङ गर्न सकेन । नेपालले ३८ रन जोड्दा पाँच विकेट गुमाइसकेको थियो । नेपाली ब्याट्सवुमन ज्योति पाण्डेले १६ रन जोड्नुबाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् । थाइल्यान्डको जितमा सिरिन्त्राले अविजित २७ रन जोडिन भने नत्ताकानले २४ रनको योगदान दिइन । बलिङतर्फ नेपालकी सीता मगरले दुई विकेट लिइन । जारी प्रतियोगितामा थाइल्यान्डले पहिलो जित दर्ता गराएको हो । नेपालले भोलि शुक्रबार आफ्नो अन्तिम खेलमा भारतसंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
रोनाल्डोलाई पछार्दै अघि बढे हेरी केन, हेर्नुहोस् जारी विश्वकपमा कसको गोल कति ?
पोर्चुगलका क्रिष्टियानो रोनाल्डो र बेल्जियमका रोमेलु लुकाकूलाई पछि पार्दै इंल्यानका कप्तान हेरी केन जारी विश्वकपमा
आयो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अर्को निर्देशन, अब चिनी उद्योगका मालिक प्रहरीको फन्दामा पर्ने
उखु किसानलाई समयमा भुत्तानी नदिएका चारवटा चिनी उद्योगका सञ्चालकलाई तत्काल पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन
रुस विश्वकपमा ‘गोल्डेन बुट’ को दौडः कसको भाग्य खुल्ला ? रोनाल्डो की बेल्जियमका रोमेलू लुकाकू
बेल्जियमका रोमेलू लुकाकूले आफुलाई गोल्डेन बुटको दाबेदारको सुचिमा दर्ज गर्न सफल भएका छन् । रसियामा
जापान र सेनेगलबीचको खेल रोमाञ्चक बन्दै, सेनेगलले दोस्रो गोल गरेको सात मिनेटमै जापानले पनि थप्यो अर्को गोल
विश्वकप फुटवमा अहिले जापान र सेनेगलबीच खेल भइरहेको छ । दुबै टोली सुरुवाती खेल जित्दै